Sidee lagu ogaadaa inaad bidaar yeelan doontid - Talo ku saabsan Ragga Qaabka leh | Ragga Stylish
Sidee loo ogaadaa inaad bidaar leedahay
Alicia tomero | | Daryeelka shaqsiyeed, Ku habboon, Timaha, Caafimaadka
Maanta sayniska wuxuu u xuubsiibtay dhinacyo badan, sida dhibaatooyinka bidaarta oo raga siiya madax xanuun badan. Waana taas sababta waxaa jira daaweyn dib u dhigeysa dhicitaankaaga iyo xitaa in la xoojiyo timaha. Qeybteenna waxaan ku ogaan karnaa nidaamyada iyo astaamaha qaarkood sida lagu ogaado haddii aad bidaar yeelan doontid.
In kastoo weli 100% waxtar ma leh weli waxaa jiri kara waqti lagu guuleysto dhowr sano. Qaacidadeeda waxaa lagu helaa iyadoo la ogaado waxa DNA-gaagu yahay in la go'aamiyo haddii ay u badan tahay inaad bidaar yeelato mustaqbalka. Noocyada kale ee daaweynta, waxaa had iyo jeer lagugula talinayaa inaad ku noolaato nolol caafimaad leh.
1 Sidee ku ogaaneysaa inaad bidaar yeelan doontid?
1.1 Iyadoo la adeegsanayo baaritaanka DNA
1.2 Calaamadaha hore iyo astaamaha
2 Ma jiraan rag aad uga gaashaaman bidaarta?
Sidee ku ogaaneysaa inaad bidaar yeelan doontid?
Shaki la'aan tusaalaha ugu fiican ayaa ah inaad eegto xididadeena dhaxalka si aan u qiimeyno hadaad bidaar u tagi kartid sababo hidde ahaan. Hidda-wadahayaasha go'aamiya timo luminta badanaa waxaa laga dhaxlaa hooyada iyo aabaha iyo koritaanka timaha waxaa go'aamiya hiddo-wadayaal badan oo kala duwan. Sidaa darteed, isku-darkaagu wuxuu noqon karaa mid gaar ah mana aha inuu raaco qaab la mid ah kan walaalaha.
Iyadoo la adeegsanayo baaritaanka DNA
Waxaa jira dhakhaatiir takhasus gaar ah u leh oo soo qaada tijaabada DNA candhuufta si loo go'aamiyo sida xasaasiga ah ee aan ugu noqon karno hormoon ay abuurtay testosterone: dihydrotestosterone.
Haddii gorfaynta la muujiyo u nuglaato hormoonkan waxaad u nuglaan kartaa timo lumis. Waxaa jira rag gaaraya 40 sano oo leh madax timo qurux badan, maxaa yeelay waa hubaal xasaasiyadda aad u DHT noqo mid yar. Muunadani waxay kaloo go aansan kartaa oo saadaalin kartaa sida qofkaasi ula dhaqmi karo noocyada dawooyinka qaarkood ee loogu talagalay timo luminta.
Calaamadaha hore iyo astaamaha
Waxaa jira dhakhaatiir u leh in dareenkaaga aad u leedahay DHT oo kaliya uusan ahayn midka go'aaminaya haddii aad u nugul tahay timo luminta, laakiin sidoo kale waa la ogaan hoormoonno la dhaxlay. Calaamadaha ugu horeeya waxay soo muuqan karaan laga bilaabo da'da 20.
Shantii ninba mid baa calaamadahaas ku arka da'daas. Markay sii gaboobaanba boqolku wuu kordhaa, da'da 30 jir waa mid aad u muhiim ah oo si tartiib tartiib ah u socota marka tobaneeyo sano ay marayaan. Raadadka timaha waxay ku sii nagaan doonaan barkin marka aad toosto ama waxaa jiri doona timo musqusha ku harta oo ku dul maydha maydhashada.
Lumidda cufnaanta timaha ee taajka Waa mid ka mid ah astaamaha ugu cad cad, halkaas oo timuhu si tartiib tartiib ah u soo dhici doonaan illaa ay ka sameeyaan iftiiminta aagga. Meel kale oo aad u muhiim ah ayaa ah qaybta laga soo galo, markay bilaabaan inay ogaadaan in foodda sii ballaadhinayso marba marka ka dambaysa.
Waxaa jira rag iyagana khibrad u leh dhibco bidaar leh, meelaha qaarkood ee madaxaaga, halkaas oo muddo ka dib ay si tartiib tartiib ah ugu koraan. Waxay ku bilaaban doontaa qaabka lacagta oo waxay ku xirnaan doontaa haddii la ogaan karo iyo haddii kale iyadoo ku xiran xaddiga timaha hareeraha ka jira waxayna dhiirrigelisaa kala-duwanaanshihiisa wax badan.
Ma jiraan rag aad uga gaashaaman bidaarta?
Waxaan horey u go'aaminay in qodobka go'aaminta uu yahay hiddo-wadaha. Sidee ku ogaan karnaa isha qaawan rag badan ayaa gala jimicsiga jirka ee timo badan. Xogtani waa mid muhiim ah maxaa yeelay timaha badan ee aad ku leedahay meel centimitir laba jibbaaran madaxaaga, inta badan waxaad u ekaan doontaa muuqaal muuqaal dabacsan oo wanaagsan muddo dheer.
Haddii timahaagu aad u dhumuc weyn yihiin Waxay sidoo kale la mid noqon doontaa ilaalinta timaha xoog badan. Waqtigan xaadirka ah, awoodda looga gudbo lakabyada jilicsan ee dhaliya bidaarta iyo sidaas darteed si daciif ah uma daciifin doono khafiifnimadiisa awgeed.
Si kastaba ha noqotee, astaamahan ayaa ah kuwo tartiib tartiib ah oo rag badan oo calaamadahaas ah ayaa qaadan kara daaweyn ka caawin doonta inay helaan daaweyn wax ku ool ah si loo awoodo in la joojiyo. Daryeelka shaqsiyeed wax badan ayaa lagu tiriyaa.
Nin si uu u daryeelo timahiisa suurtagalka ah waa inuu ku noolaadaan nolol aad u dhib badan. Ku jimicsiga isboortiga oo ay weheliso cunto wanaagsan waxay fure u noqon doontaa caafimaad wanaagsan oo siin doona xoog jirka oo dhan.
Dhakhaatiirta qaarkood si xoog leh u diida isticmaalka daawooyinka qaarkood, sida hoormoonka daaweynta, daawooyinka murugada, ama kaniiniyada walaaca. Daawooyinka ka hortagga dhiig-karka ama kaabayaasha ay ku jiraan maaddada loo yaqaan 'creatine' ayaa sidoo kale sababa in wax soo saarka DHT uu cirka isku shareero
Sidoo kale waa inaad ka fogaataa xad-dhaafka, Ma fiicna in sigaar la cabo ama la cabbo aalkolo, maadaama ay iyagu sabab u yihiin waxay xumeeyaan xoogga iyo tamarta timaha. Markaad dhaqeysid timaha, way ku habboon tahay inaad si fiican u daaweyso, iyadoon loo isticmaalin shaambo dagaal badan iyo iyadoo aan si daran loo daaweyn madaxa. Waxaad akhrin kartaa talooyinkayaga Immisa jeer ayey tahay inaad timahaaga dhaqdo.
Haddii aad rabto inaad aqriso mowduucyo badan oo laxiriira waad soo gali kartaa qoraalkeena ku saabsan "Timo jarista ugu wanaagsan ragga bidaarta leh". Ama goorta la isticmaalayo micropigmentation-ka bedel ahaan si loo qariyo la'aanta timaha madaxa ragga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Sidee loo ogaadaa inaad bidaar leedahay
Sida loo ogaado haddii aad bidaar yeelan doontid da'daada yar
Maxaa la sameeyaa marka babaasiir dilaaco